शहरबाट शब्दहरु | शब्दचित्रबाट एक प्रयास
प्रिय साथीहरुको उपहार स्विकार
Posted अप्रील 30, 2018 by Subin Shrestha
वर्गहरु: दैनिकी, म र मेरो कुरा
मलाई याद छ । पत्रकारितामा लागेको समयले भन्दा फेसबुकमा लेखिएका स्टाटसले मलाई धेरै साथीहरु माझ चिनाएको छ । पत्रकारिताको सेरोफेरोले देशमा चिनाएपनि फेसबुकमा मेरो उपस्थितीले विश्वभरका नेपाली साथीहरुमा एउटा राम्रो सम्बन्ध बिस्तार गराएको छ । मिष्टर सुविनको यो खुशीमा सदासदा धेरै विदेशिएका साथीहरुको संन्चोबिसन्चो सोध्ने र नेपाल आउँदा भेट्नेहरुको बाक्लोपनाले जीवनमा खुशी छाउँछ । आज भने साथीहरु फर्किने बेलामा प्रेमपूर्वक ल्याईदिएका केही उपहारको प्रंसगहरु यहाँ जोड्न चाहन्छु ।
जापान, लण्डन, कोरिया, कतार, अमेरिकालगायत देशबाट स्वदेश फिर्ने बेलामा ‘के उपहार चाहियो भन्नुस् ?’ भनेर धेरैले सोध्ने गरेका छन् । म मनमा कुनै कुरा नलुकाई निस्वार्थ भावमा भन्ने गरेको जवाफ यस्तो हुन्छ, ‘तँपाई ढुक्कले नेपाल फर्किनुस्, मेरो लागि यो नै महत्वपूर्ण उपहार हो ।’ यति बुझेर खुशी हुनेहरुले स्वदेश फर्किएकै दिन वा दुईचार दिनको फरक समयमा ललितपुर पसेरै मलाई भेट्छन् । केही घन्टा अपहरणमा पार्छन् । कोसेलीस्वरुप ल्याइएका प्रेमका उपहार दिन्छन् । र, भन्छन्, ‘तँपाई राम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ । तँपाईलाई भेट्ने ईच्छा र गफिने चाहना भएर यो अवसर जुराएको ।’ जीवनको अनिश्चित यात्रामा अघि बढिरहेका हामीहरु । यति कुरा सुनाएपछि मनै दंग ।
उपहारसँग नाम जोड्न नचाहने मित्रहरुले वश राम्रो पत्रकार भएको देख्न चाहन्छन् । साथीहरु एउटै चाहना राखेर सदासदा यस्तो भन्न पाइयोस् भन्ने ईच्छा राख्छन्, ‘सुविन सर, राम्रा पत्रकार हुनुहुन्छ, मेरा आत्मिय मित्र पनि हुन् ।’
गत शुक्रबार एकजना साथी स्वदेश फर्किए । साथीसँग मेरो फेसबुकमै मात्र चिनाजान । तर, मेरो स्टाटस मनपराउने मान्छे । साधारण कुराकानीले अघि बढेको मित्रता । र, स्वदेश फकिदाँ ल्याइएको घडी उपहार दिँदै उनले भने, ‘तँपाई जे पनि लेखिदिनु हुन्छ, प्लीज घडी उपहार ल्याएका साथी भनेर मेरो नाम नलेखिदिनुहोला ।’ अनलाइनको जमाना छ र समयअनुसार चल्नुस् भनेर घडी उपहार ल्याईदिएको भनिरहँदा म मौनतापूर्वक ती साथीका कुरा सुनिरहे । एकमहिना छुट्टीमा आएका साथीले अझ सक्रियतापूर्वक पत्रकारिता गर्नुस् भनेर सुझाव दिए ।
यसभन्दा अघि मनै मगमगाउने परफ्युम, ल्यापटप, मोबाइल, स्पाई पेन क्यामरा, रेकर्डर र विशेष चकलेटका प्याकेजआदि उपहारले भेटघाट कहिल्यैपनि रित्तो भएन । आफूले के दिने भनेर सोचिरहँदा साथीहरुको एउटै मात्र ईच्छा हो की ‘तँपाई राम्रो पत्रकार बन्नुस्, असल पत्रकारिता गर्नुस् ।’ उपहारसँग नाम जोड्न नचाहने मित्रहरुले वश राम्रो पत्रकार भएको देख्न चाहन्छन् । साथीहरु एउटै चाहना राखेर सदासदा यस्तो भन्न पाइयोस् भन्ने ईच्छा राख्छन्, ‘सुविन सर, राम्रा पत्रकार हुनुहुन्छ, मेरा आत्मिय मित्र पनि हुन् ।’
प्रिय साथीहरु, मेरो ईच्छा र कामना भनेकै यहाँहरु जहाँ रहनुहुन्छ, जहाँ बस्नुहुन्छ । खुशी र शान्तिपूर्वक रहने सक्ने शक्ति प्राप्त होस् । जीवनको यात्रा रहस्यमय छ । कोही कसैले पनि समयको प्रारम्भ र अन्त्यको भविष्यवाणी गर्न सक्दैनन् । हामी सब हाम्रो गतव्यतिर नजिकिएर अघि बढिरहेका छौं । यसकारण, भेदभाव र मनमुटावमा समय खर्चिनेतिर नलागौं । जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि सकेसम्म सहयोगी भएर एकअर्कामा आत्मियता कायम राख्ने प्रयास गरौं ।
देशविदेशबाट सम्झिने र मेरो जीवनमा पेशागत सफलताको सदा कामना गर्न सम्पूर्ण चिरपरिचित साथीहरुमा पुनः एकपटक आभार प्रकट गर्दै यहाँको विश्वास र चाहनालाई सदा कदर गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्दछु ।
उही मित्र सुविन
१७ बैशाख, सोमबार, २०७५
लौ पढ्नुस्, मेरो दन्त कहानी !
Posted अप्रील 24, 2018 by Subin Shrestha
वर्गहरु: म र मेरो कुरा
मान्छेका जीवनमा अनेक आयाम र मोडहरु आउँछन् र जान्छन् । हार्नेहरु कुनातिर, जित्नेहरु लक्ष्यतिर भन्ने सत्यसँग मान्छेको जीवनका आरोहअवरोह चलिरहन्छ । समयले आफ्नो रफ्तारलाई निरन्तर जारी राख्दै अघि बढिरहँदा अनेक सुखदुःखका कथाहरु पढियो, सुनियो र भोगियो पनि । हरेकका लागि जीवनमा बाल्यकालको रमाइलो छुट्टै हुन्छ । मिष्टर सुविनको बाल्यकाल र युवाकाल आकर्षक र उत्पात खालको थियो । गजब खुशी र होहल्लामा व्यतित भयो । तर जीवनको मोड कसरी पत्रकारितातर्फ मोडियो ? त्यो पछि कुनैबेला लेख्छु नै ।
ज्यान फुच्चे भएपनि कुद्न र लड्न कहिल्यै पछि परेन । राजधानीको असन (भोटाहिटी, हाल साझाभण्डार रहेको सँगैको घरमा जीवनको प्रारम्भ भएको ज्यान । यताउता पांङ्ग्रा गुडाएर हिड्ने, गणेश मन्दिरमा चढाइएका लड्डुमा एकछत्र अधिकार मेरै मात्र थियो । फुच्चे ज्यानको बदमासी र साथीभाईसँगको होहल्लामा रमेर बितेको त्यो समयमा फुटबलका राम्रा खेलाडीपनि थिएँ म । खेलमा धेरैपटक अन्तिम गोल गरेर चकलेट, कोक र कुखुरा जितेको रेकर्ड मिष्टर सुविनको छ । तर, आज यहाँ लेख्न बस्दा दन्त कहानीको सन्दर्भ खोल्न लागेको हुँ ।
यो ज्यानको एउटा दाँत यसरी सिकिस्त हुँदा करिब १२ वटा हात्ती क्वाप्प खाइदिए । कति बलियो र महंगो दाँत !
त्यो समयमा साथीहरुबीच कोक र बियर खोल्ने प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । कति मिनेटमा कतिवटा कोक खोल्ने ? धेरैपटक जितियो । दाँतको करामत धेरैलाई देखाइयो । क्या बलियो दाँत भनेर साथीहरुले प्रचार गर्दा नाकको साइज ठूलो हुन्थ्यो । तर, त्यो प्यारो र बलियो दाँतले करिब २५ वर्षपछि यसरी बाहुबलीजस्तै टुक्रिएला झै लागेको थिएन ।
मलाई याद छ, २०७४ को दशैंपछि एक्कासी दाँत दुख्न शुरु भयो । निको भईहाल्छ भनेर वास्ता गरिएन । खाना खाँदा पनि बिस्तारै चपाएर खान थाले । कति भोज र निम्तोमा दाँतको अवस्थाले खानाको स्वाद नै लिन छाडे । अब अति भयो भनेर देखाउन लग्यो जीवनसाथीले । पहिलोपटक पाइला परेको डेन्टल नै थियो परफेक्छ डेन्टल, मानभवन । छोरीको ब्रेसेल्स राख्नपनि हामी त्यहीँ पुगेका थियौं । जुन अझै जारी छ । त्यतिखेर डेन्टलमा पुग्दा यसो आफ्नो दाँत छामेर मनमनै भनेको थिएँ, ‘मेरो बलियो दाँत । अरुलाई कसरी यस्तो दाँतको समस्या आउँछ होला ?’ तर महिनादिन नबित्दै अरुजस्तै मेरो दाँतपनि बिरामी भयो ।
उपचार शुरु भयो । दाँतको गिजा कमजोर भएर दाँत हल्लिएको रिपोर्ट आयो । बाल्कोनी दाँतको अवस्थाले चबाउन कठिन बनेको थियो । डा. मनिषले दाँत निकाल्नुपर्छ भन्ने अडान लिएपनि डा. संदिपले जोगाउन सकिन्छ भनेर उपचार थाले । उपचार थालेको आज चार महिना भयो । हिजो सोमबारको साइतमा बल्ल अब दाँत जोगियो भनेर अन्तिम निष्कर्ष सुनाए । हुन त उपचार चलिरहँदा दाँतको दुःखाईले आँखाबाट आँसुसम्म झार्न बाध्य पारे । मलाई लाग्यो । दाँतको दुःखाई सहन निकै हम्मेहम्मे पर्छ । अरु कसैलाई यस्तो पीडा भएको सुन्न नपरोस् । अहिले दाँतको अवस्था पहिलाजस्तै भएको छ । नदुःख्ने र नटुट्ने । तर, त्यो समयको बलियो दाँत अहिले मसँग छ की छैन । सोचमग्न छु ।
यसो वरिपरि हेर्दा दाँतका डाक्टरले पनि राम्रै आम्दानी गर्ने रहेछ । यो ज्यानको एउटा दाँत यसरी सिकिस्त हुँदा करिब १२ वटा हात्ती क्वाप्प खाइदिए । कति बलियो र महंगो दाँत !
जे होस्, बिहान र बेलुका नियमित राम्रो मंजनले ब्रस गरेर नुन पानीले समयसमयमा कुल्ला गरेको अवस्थामा दाँतले हात्ती खाँदैन । यसकारण हात्ती चढाउने की बचाउने ? यो पढ्ने साथीहरुले स्वयम आफैले जिम्मा लिनुहोला । सबैका सम्पूर्ण दाँत सुरक्षित र बलिया रहुन् । हार्दिक शुभकामना ।
बैशाख ११, मंगलबार, २०७५
२०७४ सालको पूर्वसंन्ध्यामा हाजिरी
Posted अप्रील 12, 2018 by Subin Shrestha
यो सालले बिदा लिन अब २६ घन्टा बाँकी छ । यो बाँकी समयमा २०७४ सालभरिका धेरै घटना र परिघटनाहरुको स्मरण गर्न सक्ने आँट मभित्र छैन । किनकी जस्तो बित्यो । बितिसक्यो । अबको पल र दिनहरुमा राम्रो र सफल हुनुपर्छ भन्ने विश्वासमा अडित हुँदै उर्जाशील छ मिष्टर सुविन । Read the rest of this post »
Posted नोभेम्बर 24, 2017 by Subin Shrestha
Tags: पत्रकार, पत्रकारिता, म र मेरो कुरा, मेरो लेख, subin shrestha
प्रिय मन, ‘तिमीसँग जित्न होइन, जिउन चाहन्छु’
Posted अप्रील 14, 2017 by Subin Shrestha
नयाँ सालको पहिलोदिन धेरै प्रयत्न र प्रयासहरुको एकैपटक आक्रमण भयो । लाग्यो की, अबको हरेक पल र समयमा अद्भूत क्षमताको विकाससँगै नौलो र नयाँ गतव्यतिर अग्रसर छ पाइला । बिहानैदेखि यो मनमा धेरै कुराले एकाएक हस्तक्षेप बढाएको थियो । यसलाई सन्तुलन र बाँध्दै बाँध्दै नियमित दैनिकीमा अलमलिएँ ।
शून्यता र शान्त परिवेशले मनलाई एकैपटक च्याप्प समायो । दिउँसोतिर यसले मलाई बैचेन र छटपटी बढायो । अनि म जुरुक्क उठेँ र प्रिय मनलाई कतै हिड्न आग्रह गरेँ । उनी मेरो आग्रहलाई स्विकारेनन् । त्यसपछि छटपटिएको मन एक्कासी हुतियो कताकता ।
हिड्दाहिड्दै निकै दूरी पार गरेँ । पहिलोदिनको पैदलले मलाई मन्दिर पु¥यायो । मन्दिरसँगै बिशाल रुखको फेदमा केहीबेर बसायो । अनि एउटा कागको मिहिनेत र अठोटलाई प्रत्यक्षरुपमा देखायो । यो समय र दृश्य गजब र दुर्लभ बन्यो ।
घर आएँ । खाटको कुनातिर पलेँटी मारेर बसेँ । र, बन्द आँखाले एकाएक बितेका पलमा हाम फाल्यो । म चुपचाप दृश्यको साक्षी बनिरहेँ ।
त्यो समय र यो समयको फरकताले मन पोल्यो । जल्यो । पिडा भयो । यसलाई बिस्तारै दबाउँदै नयाँ तालिका र नयाँ पाइलाको हिसाबकिताब निकाले ।
कहिँकतै पढ्न पाइएको थियो । ‘माया गर्छौै भने गरेर देखाऊ’ ‘If u love her, show her’ यसले झन मनका्े भित्री फेदमा धक्का दियो । यसलाई इमान्दारपूर्वक बोक्दै अबको यात्रा अघि बढ्ने हतारोमा छु ।
समय बित्यो । सो बित्यो । ढिला भयो सो भयो । पछुतो एकातिर छ, अर्कातिर प्रफुल्लपनि । जीवनका हरेक रंगलाई नजिकबाट चिन्न र देख्न सिकायो । प्रेम र बिछोडलाई महसुस गर्न सिकायो ।
प्रिय मन । तिमीप्रति समर्पित मेरो मन र भावनाले तिम्रै एकाधिकार जमाएको छ । तिमे भाव र मनको चाहनाले काटिएको चंगाले बेसन्तुलन उडेजस्तै उड्दै छौं । त्यो मलाई राम्ररी थाहा छ । म हरेक गतिविधिबाट अभ्यस्त छु । मैले तिमीलाई भनेकै छु । र, भनिरहन्छु । म सबैलाई जित्नसक्छु, तर तिमीसँग जित्न होइन, जिउन चाहन्छु । वश यतिमात्र मेरो स्वार्थ हो । बाँकी भन्ने कुरा, बुझ्ने कुरा र हुने कुराहरु समयअनुसार हुँदै जानेछ ।
प्रिय मन, संसारको रित अचम्म छ । चाहेर हार्न र जित्न कोही कसैले सक्दैन । तर म स्वयम तिम्रो प्रेम र जीवनमा म समर्पित भइरहेकै छु । यसको निरन्तरता जारी रहनेछ । कहिले म थाक्न खोज्छु । म ढल्न खोज्छु । गल्न खोज्छु । यद्दपी हाम्रो बलियो डोरीको टुप्पोले मलाई उर्जा र सास दिन्छ । अनि तिम्रै नाम र तिम्रै मायाको बाटो आत्मसात गरेर हिडिरहेको छु ।
प्रिय मन, मन स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसलाई अनर्थ नलगाइयोस् । मनलाई छेक्न र रोक्न सकिँदैन । यसको विशेषता यही नै हो । मन बहकिन सक्छ । म डुब्न सक्छ । अपरिचित र परिचितको लागि यो मन चिप्लिन सक्छ । मेरो मन पनि स्वतन्त्र छ । तर यो जिद्दि मन । तिम्रै मनसँग डुबेर, बहकिएर र चिप्लिरहेको छ ।
मैले सुनेको छु । र, म विश्वास गर्छु ।
मलाई थाहा छैन, भोली के हुन्छ ।
तिमी साथ देऊ, जे हुन्छ, हुन्छ ।
प्रिय मन, अरु ‘मन’हरु रोज्न सक्दिन
Posted मार्च 18, 2017 by Subin Shrestha
Tags: प्रेम, मन
मेरो शब्दमा धेरैपटक समयको उतारचढावहरु उक्लिरहन्छ । क्रमश ओर्लिरहन्छ । यसलाई भाषामा खराब समय भनेर परिभाषित गरिन्छ । तर मेरो समय गजब चलिरहेको छ । यो समय वश उक्लिरहेछ, उक्लिरहेछ ।
यो जीवनको प्रगति हो । यात्राको विशेष शुभारम्भ पनि हो । अनि मनहरुको आकांक्षा र इच्छाहरुको समागम पनि हो । प्रिय मन यसलाई मैले स्वर्ग र नरकको वास्तविकताभित्र रहेर दुवै अनुभूति गरिरहेको छु । एउटा गीत छ हिन्दीमा, जुन प्रिय मनमा समर्पित गर्न चाहन्छु ।
जीना यहाँ, मरना यहाँ ।
इसके सिवा जाना कहाँ ।
प्रिय मनमा यी शब्दहरु समर्पित गरिरहँदा म एक्लै छु । खाटको मध्यभागमा पलेटी मारेर, ढाडमा सिरानीको सहयोगमा काखमा ल्यापटप राखेर शब्द खेती गरिरहेको छु । र, मनको भित्री आन्नदित वहहरु छरिरहेको छु ।
प्रिय मन, धेरै साताअघि देखि मनभित्रका ताण्डव नृत्य चलेको छ, शब्दहरुको । यसलाई पोख्न र समर्पित गर्न म आतुर थिएँ । तर समय र परिस्थिती अनि दैनिकीको तालमेल नमिल्दा यो सम्भव हुन सकिरहेको थिएन । आज शनिबारको मौका पारेर चैत्र ५ गतेको साइतमा पोखिरहेको छु, सुन्दर शब्दहरु प्रिय मनप्रति ।
भोली के हुन्छ ?
तिमी साथ देऊ
जे हुन्छ, हुन्छ ।
यी सुन्दर शब्दहरु जोडेर प्रिय मनप्रति जीवनलाई सुम्पेको छु । यो सद्भाव र प्रेमको गठबन्धन यात्राले करिब १५ वर्ष पार गरेको छ । अझैपनि यस्तै र यतिकै भाव र प्रेमका फूलहरु सुम्पेर म माया गरिरहेकै छु, विश्वास गरिरहेकै छु र हरेक पल प्रिय मनकै वरिपरि घुमिरहेकै छु ।
प्रिय मन, यो वास्तविकताबाट तिमी परिचित छौं । यसलाई स्वार्थपरक प्रेम भन या निश्वार्थपरक प्रेम । प्रेम त प्रेम नै हो । यसमा म बाँधिएको छु । र, डोरीको अवतारमा प्रिय मनलाई बाँधिरहेको छु, म यसैसँग तानिरहेको छु । यो सत्य हो । र, यस्तै भइरहेको छ ।
प्रिय मन, म स्विकार गर्न तयार छु । मेरो कमजोरी र वास्तविकतामा । म आर्थिक क्रान्तिमा असफल भइरहेको छु । आर्थिक गतिको रेखाभित्रको सतही गतिमा म अल्झिएको छु । मैले यहाँ मुटु र प्रेममाथि हात राखेर भन्नैपर्छ की आर्थिक पाटोसँग मैले प्रिय मनको तुलना गर्न सकिन । र, यो सम्भव पनि छैन । म र मेरो सास रहेसम्म यो हुन दिन्न भनेर अठोट लिएको छु ।
प्रिय मन । म तिम्रो व्याकुलता र छटपटी राम्ररी बुझ्छु । स्वादिलो र चिल्लो खान्की सबलाई मनपर्छ । सुन्दर बस्तुहरुमा सबै आकर्षित हुन्छन् । यस्ता कुराहरु दिर्घकालीन हुन्न । अल्पकालिन सुन्दरता र सम्बन्धमा रमाएर तिमी गलत सोच र सपनामा अलमलिर बाटो बिराउने तयारीमा नलाग भनेर सम्झाउन सकिएको छैन प्रिय मन । आखिर कहिँ कतै मैले एउटा लेखमा लेखेको थिएँ, कसको मनभित्र को पस्न सक्छ र ?
प्रिय मन, म तिम्रो मनको गहिराई नाप्न सक्छु । तिमीसँग रुन सक्छु । र, आनन्दका साथ खुशीले हाँस्न सक्छु । तर अरु सक्दैनन् । किनकी संसारमा स्वार्थ छ । प्रेममा स्वार्थ छ । दुईदिनको रमाइलो अंगाल्न प्रिय मन तिमीले तिम्रो भावनालाई बहन रोक्नुपर्छ ।
प्रिय मन । तिमी आफूमा डुबेर हेर । सोचेर हेर । प्रेमको अर्थ बुझेर हेर । यो पारदर्शी छ । यसमा सुख छ । दुःख छ । माया छ । आत्मियता छ । त्याग छ । विश्वास छ । समर्पण छ । धेरै छन् । तर मनहरु हुन्नन् । वश एउटै मनसँग जोडिएको मन हुन्छ । यसले मुटु चल्छ । ढुकढुकी एउटै बन्छ । यसमा जीवन जोडिन्छ ।
प्रिय मन यस्ता प्रेममय भावहरु पोखेर तिमीलाई म रोक्न र छेक्न सक्दिन । मेरो मायाको एउटा आफ्नै नियम छ । प्रिय मनलाई स्वतन्त्र राख । प्रिय मनको खुशी नै मेरो खुशी हो । यसकारण कतैपनि अवरोध हुनुहुन्न । यस्तै यस्तै ।
यसकारण सदासदा चुपचाप उभिएर बस्छु तिम्रो छेऊ । तिम्रो अनुहारका भावहरु हेरिरहन्छु । तिम्रो मनको गहिराई नापिरहन्छु । यस्तै यस्तै । एउटा गजबको सत्य प्रिय मनमा समर्पित गर्दै दावी गर्छु । प्रिय मन, म अरु मनहरु रोजेर खुशी बन्न सक्दिन । अरु मन रोज्न सक्दिन । माफ गर ।
प्रिय मन, मेरो एउटा नराम्रो बानी छ । जुन तिमीले मनपर्छ भनेर कहिल्यै स्विकार गरेनौं । त्यो हो । म सहन्छु, सहन सक्छु र सहिरहेकै छु । यसमा मेरो केही स्वार्थ छैन । वश तिमीले मलाई जसरी सडकबाट उठायौं । माया दियौं र माया गर्न सिकायौं । तिम्रो यही एउटा गल्तीको कारण म ऋणी भइरहेको छु । सास रहेसम्म पनि यसको ऋण चुक्ता गर्न सक्दिँन । तर माया गरेर साँवामात्रै भएपनि तिर्न सक्छु, यसमा ढुक्क बन प्रिय मन ।
प्रिय मन, तिमीले मलाई कहिले सारै आगो बनाउँछौं । कहिले बादल । एउटा मन छ । कहिले घाम । कहिले पानी बनाएर दुःख दिन्छौ, र सुख पनि । कहिले पीडा दिन्छौं, र कहिले न्यानोपनि ।
प्रिय मन । तिमीसँग पोख्नुपर्ने धेरै समय सान्दर्भिक कुराहरु पनि छन् । आकस्मिक लेख्न बस्दा धेरै भारले थिचिएको अवस्था छ यतिखेर । यसकारण थोरैमात्र पोखेको छु । अरु शब्दहरु चाँडै नै सम्झेर पस्किनेछु प्रिय मन ।
चैत्र ५, २०७३ शनिबार
Comments:2टिप्पणीहरु
प्रिय मनविरुद्ध ‘म’हरुको आत्महत्या !
Posted अक्टोबर 21, 2016 by Subin Shrestha
याद साँची तड्पी रहन्छु
आज फेरि रुन्छु म
सम्बोधन धेरैपछि गरिरहेको छु प्रिय मन । यो शहर निष्ठुरी छ । स्वार्थी छ । यसैमा दैनिक अभ्यस्त भइरहँदा तिमीलाई भुलेछु महिनौदिन देखि । मलाई थाहा छ, प्रिय मन । तिमी मसँग छौं र म तिमीसँग । तरपनि जिन्दगीको आरोह अवरोहमा हाम्रो साथ र हातमा न्यानोपन र समर्पणको भावमा डुबिरहँदा तिमीलाई भुसुक्कै भुलेछु प्रिय मन ।
हिजो कार्तिक ४ गते बेलुका तिमीलाई धेरै धेरै सम्झिएँ । प्रिय मनको एक्कासी याद बल्झिएपछि शब्द खर्चिन मन लागेको थियो । तर अवस्थाले यसलाई पूरा हुन दिएन । प्रिय मन, तिमी यति धेरै कठोर र निष्ठुरी कसरी हुनसक्छौं ? यात्राको करिब १५ बसन्त बितिसक्दा प्रेमको मुना कुल्चिएको र मरेको दावी गर्दा मलाई नराम्ररी दुख्यो चसक्क ।
प्रिय मन, जिन्दगीको उद्देश्य जिउनु हो । तर जिउनुको अर्थ एक्लो वा निन्तात एक्लो होइन । कतै मैले सुनेको छु, गुरु श्री श्री श्री रविशंकरले जिउनुको गहिरो अर्थ लगाउँदै भन्नुहुन्छ, ‘सहकार्य, सहयात्रा र संयुक्त खुशीको आनन्द नै जीउनु हो ।’
प्रिय मन, म निकैबेर तिम्रो विगत, वर्तमान र भविष्यको दुःख र सुखको जोडघटाउ गरेर रोएँ । लामो र गहिरो सास लिन्दै विगतलाई सम्झिएँ, र, वर्तमानलाई थामे र भविष्यलाई माथि उठाएँ ।
प्रिय मन, एक्कासी यो हुरीले म उभिएको धरातल त भासियो । मैले शान्त र मौन बसेर थामे । र, मभित्रको अन्तरआत्मामा संचारित भगवान ओशोको शक्तिले मुर्तिझैं स्तब्ध हुँदै बसिरहेँ । म उभिन र फेरि बोल्न र प्रतिरोध जनाउन असम्भव अवस्थामा थिएँ, प्रिय मन ।
प्रिय मन, तिम्रो आक्रोश र आगोलाई मैले सही र सन्तुलन मिलाएर थामेँ । जसरी विष पिउन महादेव तयार भए, मैले पनि आक्रोश र आगोलाई निलकण्ठसरि निर्धक्क पिएँ, पिइरहेँ । हो म चुपचाप बसिरहेँ, माफ गर प्रिय मन ।
प्रिय मन, मैले तिमीसँगको खुशीमा र तिम्रो सामिप्यतामा आफ्नो जीवनको हिसाबकिताब गर्न बिर्सिएको रहेछु । तिम्रै हाँसो र माया अल्झिएर उज्यालो दुनियामा भूलिरहेँ । मलाई कोही कसैको सहकार्यको अभाव भएन । तिमीले निर्माण गरेको एउटा सुन्दर दुनियामा प्रफुल्लित हुँदै दिनहरु बिते, महिना बिते र वर्ष बिते । साँच्चिकै केही पत्तो नै भएन ।
आज ज्वालामुखीझैं विष्फोटको शैलीमा प्रकट भएको प्रश्नले म स्तब्ध र मौन भएँ । आखिर सत्य त सत्य नै हुन्छ । मैले आजसम्म के गरेँ जिन्दगीमा ? प्रिय मनका लागि हरपल समर्पित रहने यो प्रेमीले प्रिय मनलाई आजसम्म के नै दियो ? उफ्, प्रश्नै प्रश्नले म कमजोर हुँदै टुटे रातभर । तरपनि प्रिय मनको अघि एउटा बाघ जस्तै जो जंगल सुरक्षामा बसेको छ, त्यस्तै शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आँखा छलेर कमजोर भइरहेँ ।
प्रिय मन, म कुन यात्रामा निस्किएको यात्री हुँ, त्यो पनि महसुस भएन । म बश हिडिरहेँ, गतव्यहिन भएर । प्रिय मन, त्यो तिमीले मलाई हिजोमात्र थाहा दियौं । यात्रामा धेरै रोकावट भयो । बाधा भयो । समाजबाट तिमी हेपियौं । प्रिय मनलाई समाजमा उभिनसक्ने हैसियत मैले खोसेँ । परिवारजनमा म निकम्मा बनेर तिमीलाई दुःख दिइरहेँ । यावंत यस्ता धेरै कारणले प्रिय मनको मनमा नराम्ररी चोट दिएँ । म प्रयत्नशील हुने उर्जा सबै तिम्रै यात्रामा समर्पित भयो । मेरा सोचहरु र केही थोपा पसिनाहरु प्रिय मनकै मार्गमा पोखियो । यस्तै यस्तैमा समय बित्यो ।
म वश एक्लिएँ, हेपिएँ, थिचिएँ र कुल्चिएँ । प्रिय मन, यी सब प्रहारहरु एकाएक हिजो मैमाथि निरन्तर परिरह्यो । म मौन र शान्तभावमा प्रहारहरुसँग हारिरहेँ । आखिर हो पनि, प्रिय मनको प्रश्नमा मेरो कुनै जवाफपनि थिएन ।
प्रिय मन, शब्दहरुमा अबको यात्राका शब्दहरुपनि हामफाल्न खोज्दैछ । तर म रोक्दैछु । विगतका पल, आत्मियता र प्रेमका भावहरु सबै आत्महत्याको प्रयास गरिरहेका छन् । तर प्रिय मनसँगको जीवनभरको गाँठो बाँधिदिने माताहरुको अनुहार अझै चम्किलो र मुस्कानमय देखिरहेको छु । कारण खोतल्न म सक्दिन । यात्रा र जीवनको ’boutमा पूरै चिना उहाँहरुकै हातमा छ । यो देखेर म झन अचम्मित बनेको छु । म माताहरुसँग सोध्ने आँट गरिरहेको छु, ‘प्रिय मन र मेरो यो बन्धनमा आएको झट्कामाथि किन यस्तो वेवास्ता ?’
प्रिय मन, म तिम्रै हुँ । र, सदासदा रहिरहनेछु । मभित्रको अन्तरआत्माले तिमीप्रति समर्पित हुँदै अहिले बिदा ।
रुन्छ हिद्धय धेरै, वर्षिन्छ आँसु
टुक्रेको मुटु लिई, कोही त भनिदेऊ
कसरी म हाँसु ?
मात्र तिम्रो, सिर्फ तिम्रो ‘म’
म सुविन श्रेष्ठ
अब म बोल्दिन !
छेपारो नै हुँ की म ?
गीतसँगै जीवनको जीत
मित्रहरुले बढी पढेका
मिलनको आशा र तिम्रो एक्लोपना
मुटुको तालाबन्दी र चार नयाँ साथीहरु
Yakthungba on प्रिय मन, अरु ‘मन’हरु रोज्न सक्दिन
Prakash on अब म बोल्दिन !
Madhav Prasad Ghimire on प्रिय मन, अरु ‘मन’हरु रोज्न सक्दिन
charleensolomon401 on गीतसँगै जीवनको जीत
real estate nepal on निर्वाचन अपडेटमा अनलाइन पत्रिका पहिलो नम्बर
Dibakar Pant ( Purwa Sachib ) on मेरो आफ्नै समाचार !
Ghanshyam on जुत्ता लुकाउँदा डम्बर दंग
Pant,Dibakar, Currently in the US on रेडियो खोल्न रमाएको मन
Pant,Dibakar, Currently in the US on सत्य लेखनको साहस !
Chij Gurung on कोठा सरेको छु !
yogen on मायामा शंका बारम्बार हुन्छ !
SHANTA SHRESTHA on मायाको गाँठो, मायाका कुरा र यांवत जिन्दगी…
prawez ahmed on आभार, २०१० को यस्तो भयो ! ‘2010 in review’
jafar on बिद्यालयले पत्र लेख्यो, सबिना ‘टोकियो’ तिर !
आभार, २०१० को यस्तो भयो ! ’2010 in review’ « शहरबाट शब्दहरु on कोठा सरेको छु !
MERO GHAR KO SHOPPING
NATIONAL FORUM OF PHOTO JOURNALISTS
NEPAL AMBASSY – QATAR
OM SHREE ONLINE
UNICODE NEPALI TYPE
मिलनको मनको कुरा
MY NEWS PHOTOS
MY QATAR STAY
एच. के. नेपाल
BBC – NEPALI
PASA PUCHA UK
अप्रील 2018 (3)
नोभेम्बर 2017 (1)
अप्रील 2017 (1)
अक्टोबर 2016 (1)
जुन 2016 (2)
फ्रेवुअरी 2016 (1)
नोभेम्बर 2015 (1)
अक्टोबर 2015 (2)
जुन 2015 (1)
जनवरी 2015 (8)
नोभेम्बर 2014 (1)
अक्टोबर 2014 (1)
नोभेम्बर 2013 (3)
अक्टोबर 2013 (1)
सेप्टेम्बर 2012 (1)
जुन 2012 (1)
फ्रेवुअरी 2012 (1)
नोभेम्बर 2011 (9)
नोभेम्बर 2010 (1)
अक्टोबर 2010 (1)
अगस्ट 2010 (1)
जुलाई 2010 (9)
जुन 2010 (1)
डिसेम्बर 2009 (3)
अक्टोबर 2009 (15)
अगस्ट 2009 (1)
जुन 2009 (3)
अप्रील 2009 (5)
मार्च 2009 (24)
डिसेम्बर 2008 (5)
नोभेम्बर 2008 (4)
अक्टोबर 2008 (12)
सेप्टेम्बर 2008 (8)
अगस्ट 2008 (9)
जुन 2008 (29)
Photo Journalist Subin
Does @KotakCares take more than 20 days to do document verification for openingacurrent account?5months ago
@KotakCares Woodhouse road, colaba 98708008485months ago
Guys No response from the bank officer to openacurrent account even after submitting all doc @KotakCares5months ago
@oscarsuraj @kotakbank Its very irritating experience. @Kona kona hai suna...@5months ago